Canapé malagasy - Recette de cuisine malagasy de Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 22 novembre 2016
Ito ary ny canape malagasy! Tsotra dia tsotra. Natao madinidinika izy ireto fa ho an’olona maro.
Fotoana hiketrehana azy: 0 mn
Fomba fikarakarana Canapé malagasy
Zaraina 4 ny pain de mie (1 tranche zaraina 4).
Osorana mayonnaise sy ketchup efa nafangaro tsara.
Apetraka eo ambony tranche de carotte efa nolomana vinaigrette 12h mialoha. Ary farany dia apetraka ny tranche de charcuterie (cervelas teto).
Nanolotra: Rova Andriantsoa.
canapé apéritif facile, canapé apéritif facile froid, canapés apéritif dinatoire, entrée malagasy, recette canapé pain de mie
Article précédent : Composé malagasy
Riz aux légumesArticle suivant :